Wemukelwa Ngezandla Ezimhlophe uRoderick Mutuma
Umdlali weHighlanders uRoderick Mutuma
Wemukelwe ngezandla zombili ngabalandeli beqembu le Highlanders umgadli obedlalela iqembu le Dynamos uRoderick Mutuma.
UMutuma uphenduke umlamulankunzi ngeSonto emini ngemva kokudluliselwa phambili komdlalo obekumele ubephakathi kweqembu le Bosso lele Power Dynamos elase Zambia.
Lokhu ngemva kokuba abalandeli beqembu le Highlanders sebetshinga bethi kabangeke basuke enkundleni yeLuveve lumdlalo ungadlalwanga ngoba izulu okuyilo elidale ukuba lumdlalo udluliselwe phambili beselimile ukuna ngesikhathi kutshaya ihola lesithathu emini.
Iziphathamandla zeqembu le Bosso zithe zisizwa abalandeli bememeza igama lika Mutuma zahle zamtshayela ucingo lumgadli obevele esesukile enkundleni ndawonye labanye bakhe zathi kaphenduke ezohlangana labalandeli.
Kuthe esephendukile wethulwa kibo abalandeli bamjabulela kakhulu qede baphuma ngokuthula enkundleni baphindela emakhaya.
Omunye wabadlali beqembu le Highlanders uRahman Kutsanzira uthi uMutuma ulakho ukudlala indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu le Highlanders lonyaka.
“Wenza kuhle nxa sizilolonga njalo kuzakuya ngabaqeqetshi ukuba bamsebenzisa njani kodwa mina njengomdlali ngikhangelele ukudlala laye njalo ngilethemba ukuba engasiphathisa.”
Umdlali weHighlanders uRoderick Mutumwa
Ophethe isikhundla sika mgcinisihlalo weqembu le Highlanders uModern Ngwenya uthe lumdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu le Highlanders lele Power Dynamos ngeSonto usuzadlalwa ngoLwesibili khona njalo enkundleni yeLuveve ngehola lesithathu emini.
Kungenzeka njalo ukuba ungasabi khona lumdlalo kumbe kutshintshwe inkundla yokudlalela njengoba izulu liqhubekela phambili liwohloka, okutsho ukuba isimo senkundla yeLuveve ebesivele sesifana lexhaphozi sesisibi ngamandla.
Ensukwini ezedluleyo umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu le Highlanders lele FC Platinum owenkezo ye ZNA Commanders’ Charities enkundleni ye Barbourfields udluliselwe phambili ngoba inkundla seyaphenduka ixhaphozi ngenxa yezulu likazamcolo.
NgoMgqibelo kodwa iqembu le Chicken Inn lenelisile ukungqikilana leqembu le Power Dynamos enkundleni yeLuveve emdlalweni wobungane wona ophele zingutshiki lobhanqa 1 ka 1.